बैंकमा घरकर्जाको अवधि कसरी चयन गर्ने ? - Arthapage
बैंकमा घरकर्जाको अवधि कसरी चयन गर्ने ?
के तपाईं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर घरजग्गा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ? वा, भइरहेको जग्गामा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने बैंकमा ऋण लिन जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरु जान्नैपर्ने हुन्छ ।
बैंकबाट घरकर्जा कसरी पाइन्छ ? कुन कुन शिर्षकमा पाइन्छ रु घरकर्जा लिने प्रकृयाहरु के के हुन् ? कुन कुन कागजपत्र चाहिन्छन् ? कुन बैंकबाट ऋण लिँदा सस्तो पर्छ ? ऋणको ईएमआई कसरी तिर्नुपर्छ रु लगायत कुराहरुको जानकारी भएको खण्डमा बैंकबाट ऋण लिँदा सजिलो पनि हुन्छ र आफुलाई आवश्यक ऋणको बारेमा आफै निर्णय गर्न सकिन्छ ।
आज हामीले बैंकबाट घरकर्जा लिँदा अवधी कसरी चयन गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदै छौंः
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामन्यतः ५ वर्षदेखि ३५ वर्ष अवधिसम्मको होमलोन लिन पाइन्छ । यदि तपाइले लामो अबधि राखेर ऋण लिनुभयो भने मासिक किस्ता कम तिरे पुग्छ ।
लामो अवधिको ऋण लिँदा महिनामा थोरै पैसा साँबा र ब्याजबापत किस्ता भुक्तानी गर्दा तपाईंको दैनिक जीवनमा खासै अप्ठेरो पर्दैन् । तर, यसो गर्दा तपाईंले ब्याजका रुपमा साँवा रकमभन्दा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, यदि तपाइले कम अवधिको ऋण लिनुभयो भने मासिक किस्ता धेरै तिर्नुपर्छ तर ऋण चाँडै चुक्ता हुने हुँदा तपाइले ब्याजका रुपमा तिर्ने रकम कम हुन्छ ।
तपाइँले बैंकबाट ३० लाख रुपैयाँ घरकर्जा लिनुभयो । ब्याजदर ११ प्रतिशत र अवधि १५ वर्षको छ । यसको मासिक किस्ता ३४ हजार ९७ रुपैयाँ हुन्छ । यो ऋण चुक्ता गरिसक्दा तपाईंले ३१ लाख रुपैयाँ ब्याजमात्र बुझाउन पर्छ । यहाँ साँवाभन्दा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने देखियो ।घरकर्जाको अवधि घटाएर १० वर्षमात्र बनाउनुभयो भने तपाईंको मासिक किस्ता ४१ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । तपाइँले ऋण चुक्ता गर्दासम्म १९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ ।
उदाहरणका लागि, तपाइँले बैंकबाट ३० लाख रुपैयाँ घरकर्जा लिनुभयो । ब्याजदर ११ प्रतिशत र अवधि १५ वर्षको छ । यसको मासिक किस्ता ३४ हजार ९७ रुपैयाँ हुन्छ । यो ऋण चुक्ता गरिसक्दा तपाईंले ३१ लाख रुपैयाँ ब्याजमात्र बुझाउन पर्छ । यहाँ साँवाभन्दा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने देखियो ।
तर, घरकर्जाको अवधि घटाएर १० वर्षमात्र बनाउनुभयो भने तपाईंको मासिक किस्ता ४१ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । तपाइँले ऋण चुक्ता गर्दासम्म १९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ । ५ वर्ष अवधि घटाउँदा समग्रमा ब्याज रकम झण्डै १२ लाख रुपैयाँ कम पर्न आउँछ । ईएमआईको आकार ३४ हजारको ठाउँमा ४१ हजार रुपैयाँ पुग्यो ।
तपाईंलाई अवधि कम राखी मासिक किस्ता बढी तिर्न कम्फर्टटेवल हुन्छ कि अवधि बढी राखेर मासिक किस्ता कम तिर्न कम्फर्टवेल हुन्छ रु अवधि जति लम्बायो समग्रमा तिर्नुपर्ने ब्याज रकम पनि उति नै बढी हुन्छ । यो कुरा बैंकले सामन्यतयाः ग्राहकलाई बुझाउन सकेका हुँदैनन् ।
तपाईंले ऋण लिँदा सकेसम्म बढी भन्दा बढी डाउन पेमेन्ट गरेर कम भन्दा कम अवधिको ऋण लिँदा राम्रो हुन्छ । तर, यसका लागि तपाईंको आम्दानीले पनि धान्न सक्नुपर्छ । यदि आम्दानी राम्रो छ भने कम अवधिको ऋण लिनुहोस् । यसो गर्दा ईएमआई बढी परेपनि समग्रमा ब्याज रकम कम पर्न जान्छ ।
घरकर्जा यो उमेरमा लिनुपर्छ भन्ने छैन् । तपाईंलाई जतिबेला ऋणको आवश्यकता पर्छ, त्यतिबेलै ऋण लिने हो । यदि आफ्नो उमेरले घरकर्जा लिन नमिल्ने भएमा परिवारका सदस्यहरुलाई ‘ज्वाइन्ट एप्लिकेन्ट’ बनाउन सकिन्छ । परिवारको सदस्य जमानत बसेपछि उसको आम्दानीले पनि ऋण लिन सहयोग गर्छ ।
बरु ऋण लिनका लागि उपयुक्त समय पर्खिन सकिन्छ । सामन्यतया बैंकहरुले दशैं तिहारको बेलामा विभिन्न स्किमहरु ल्याएका हुन्छन् । त्यो बेलामा बैंकहरुले ब्याजदर र सर्भिस चार्जमा केही छुट दिन्छन् । नेपालमा फेस्टिव टाईममा अरु बेलाभन्दा केही छुट सुविधा दिएका हुन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै परिपत्र जारी गरेर घरकर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अब बैंकबाट जतिसुकै अवधिको ऋण लिँदा पनि अन्तिम किस्ता बुझाउँदासम्म ब्याजदर थपघट हुने छैन । तर, फिस्क्स्ड ब्याजदरको ऋण नलिएर फ्लोटिङ ब्याजदरको ऋण लिन पनि सक्नुहुन्छ ,
प्रकाशित मितिः 8:18:46 AM |
Prevयसपालीको दशैंमा यातायात क्षेत्रमा देखिदै छन् यी ८ फरक
Nextबाँके/बर्दियाका कृषक र साना दूग्ध व्यवसायी भन्छन् – हामीलाई विस्थापित गर्न खोजियो